စံခလပူရီမှ မဲ့ဆောက်သို့ ထွက်ပြေးရပုံ
စံခပူရီမြို့ လေးကို အခုလိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ ကာဗွန်ကင်းရှင်းတယ်။ သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်တဲ့ သား၊ ငါး ရတယ်။ အမြဲစိမ်းနေတယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လေကောင်းလေသန့်ရတယ်။
စံခလပူရီမြို့  လို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းမြို့ လေး။
မြန်မာ ဘက် ဘုရားဆုံးဆူမြို့  နဲ့ နယ်နမိတ်ခြင်းစပ်လျှက်။ မြို့ လေးက တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ တည်ရှိနေတယ်။ ဘေးမှာက အင်းရှိတယ်။ မြစ်တခုကို ပိတ်ပြီးအင်းလုပ်ထားတာပဲ သိတယ်။ အင်းရဲ့ အောက်မှာ တကယ့် ဘုရားသုံးဆူအစစ်ရှိတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။ တခါမှ မတွေ့ဘူးဘူး။ မြန်မာနယ်ပိုင်နက်အစစ်က အင်း(ရေကာတာ) အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘုရားသုံးဆူဆိုတဲ့နေရာလေးထိ လို့ဒေသခံတွေပြောတာကြားဘူးတယ်။ မွန်၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ လောရှမ်း တွေနေထိုင်ကြတယ်။ မွန်က မြစ်ကမ်းတဘက်ခြမ်း၊ ကရင်က တခြမ်း။ မွန် နဲ့ ရှမ်းဘက်အခြမ်းကို ကန့်လန့်ခံထားတာက သမိုင်းဝင်သစ်သားတံထားအရှည်ကြီး။ ဒါကို မွန်ဘုန်းကြီးဦးဆောင်ပီး ဆောက်ထားတာ။ အဲဒိ တံတားပေါ်မှာ ကျနော်နဲ့ကျနော့်မိန်းမ ချိန်းတွေ့တုံးက ဟိုကလိဒီကလိ..ဟိ..ဟိ..။ လောရှမ်းကတော့ ကရင်ဘက်အခြမ်းမှာ။ ဗမာတွေကတော့ ဟိုရောရော၊ ဒီရောရော။ ထိုင်းလူမျိုးအစစ်ဆိုလို့ ရှားတယ်ထင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ စံခမြို့ လေးက ထိုင်းပိုင်နက်။ ထုံးစံအတိုင် မွန်နဲ့ကရင်နဲ့က ဒီမြို့ မှာ အပြိုင်အဆိုင် မြန်မာလက်ဝှေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြတယ်။ တခါတလေမွန်နိုင်တယ်။ တခါတလေ ကရင်စား တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်းအချုပ်ထောင်က ဒိုင်လူကြီးစားတာများတယ်။
ဒီမြို့ လေးမှာ DEP လို့ခေါ်တဲ့ Distance Education Programme ရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတယ်။ အော်စီအစိုးရက ရံပုံငွေနဲ့ လုပ်တာ။ အင်္ဂလိပ်စာတက်ရင် အော်စီက Certificate III in Community Management ဆိုတဲ့ Course ကို အဝေးသင်တက်လို့ရတယ်။ အခုတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဒီမြို့ မှာ ABSDF၊ KNU၊ DPNS၊ PDF၊ NLD-LA စတဲ့ နာမည်ကြီး အဖွဲ့တွေရဲ့ ရုံးရှိတယ်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက တော့ ဒီမြို့ မှာ သူကြီးပေါ့။ သွားရေးလာရေး သူကြီး ကိုပဲအားကိုးရတယ်။ သူကိုပဲ ရိုသေ လေးစားရတယ်။ သူကြီးအပြင် နယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ KNU မှာလည်း အာဏာရှိတယ်။ သူ့ကိုလည်း တခါတလေ တောအရက် ကောင်းကောင်း ၊ကျက်ကောင်လုံးကြော်နဲ့မစရတယ်။
မြန်မာဘက်က ထောက်လှမ်းရေးတွေကတော့ ခွေးလေခွေးလင့်တွေလို ဟိုအမှိုက်ပုံ၊ ဒီအမှိုက်ပုံမှာ တခါ တလေတော့ရှိတက်တယ်။ ကျနော်တို့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ ဆန်တော့ မရှိဘူးဗျ။ စောက်စားတော့ကြီးတော့။ စကားပြောရင် လေကြီးလေကျယ်နဲ့။ နောက်ဆုံး တော့အဲဒိမြို ကနေ ပြေးရပါ လေရာ။
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ။ မှတ်မှတ်ရရလေးပါ။ တကယ်လည်းပင်ပန်းဆင်းရဲခံ၊ အသက်တွေပါ ရင်းပြီး ပြေးခဲ့ရတယ်။
အချိန်ကတော့ ၂၀၀၃-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ။ ကျနော် တို့ရုံးကို မနက်ပိုင်း ထိုင်းတပ်က ဗိုလ်မှုးကြီးတစ်ယောက် ယောက်လာတယ်။ စစ်ယူနီဖောင်း၊ ဘော်ဒီဂတ်တွေ အပြည့်နဲ့။ သူ့ပုံက အကောင်ကသေးသေး။ အရက်သမားရုပ်လည်းပေါက်နေတယ်။
မြန်မာ စစ်တပ်က ဗိုလ်မှုးကြီးတွေနဲ့ စတိုင်ချင်းကလည်းကွာပလို့မှတ်ချက်ချမိတယ်။ ရုံးမှာက ကျနော်ရယ် ကျနော်တို့တပ်မှုးကြီးရယ်၊ ဒု-တပ်မှုးရယ်၊ တခြားအောက်ခြေအဆင့် ရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်။ ထိုင်းတပ်က ဗိုလ်မှုးကြီးလာပြီးအာတော့ ကျနော်နဲ့ ကျနော်တပ်မှုး ထွက်ပြီးစကားပြောတယ်။ တပ်မှုးကြီးနှစ်ယောက်စလုံး ကလည်း ဘိုလိုတော်တော် ကောင်းဗျ။ သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
ဗိုလ်မှုးကြီး (ထိုင်းတပ်) Who’s in charge of this office?
တပ်မှုး (DPNS) Me.
ဗိုလ်မှုးကြီး (ထိုင်းတပ်) What is your name?
တပ်မှုး (DPNS) Aung Kyaw Soe
ဗိုလ်မှုးကြီး (ထိုင်းတပ်) You close your office in 48 hours?
တပ်မှုး (DPNS) Yes.
တပ်မှုး (DPNS) Why?
ဗိုလ်မှုးကြီး (ထိုင်းတပ်) No question
တပ်မှုး (DPNS) ခပ်ခွန်းခပ် (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကို ထိုင်းလိုပြောတာ)
နှစ်ယောက်လုံး အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာ တံတွေးတွေတော့ တော်တော်ကုန်တယ်။ ဘေးနားကကျနော်လည်း ဒူးတုန်နေပြီ။ ကျနော်တို့တပ်မှုးကြည့်တော့လည်း၊ ကွမ်းလေး တမြုံ့ မြုံနဲ့ သူလည်း သေးထွက်တော့မယ်။
နောက်ဆုံးတော့ပြေကြပါလေရာဗျာ….။ ကျနော်တို့ကျောင်းသားရုံးတွေပိတ်၊ ရသမျှပစ္စည်း လေးတွေသယ် လွတ်ရာကျွတ်ရာပေါ့။
January 20: At least nine Burmese dissidents, includingachild, were arrested by Thai police for "security concerns" in Sangkhlaburi while in hiding. Those arrested included members of the National League for Democracy-Liberated Area (NLD-LA), Democratic Party foraNew Society (DPNS), All Burma Student Democratic Front (ABSDF), Dawei Women's Union, and the Myeik-Dawei United Front. Seven were deported on January 22 and one person was sentenced to forty-eight days in Thai prison for harboring illegal migrants. The "illegals" were fined 4,000 Baht (U.S.$95) each. Police confiscated around 349,000 Baht (U.S.$8,310) from the DPNS office, two computers from the ABSDF office and documents from the other groups.
ဒီအထဲမှာပါတဲ့ခလေးက တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့်တပ်မှုးရဲ့ ခလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူမလည်း ပျင်းလို့ သူ့အဖေနဲ့လိုက်ခဲ့တာပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, November 30, 2009
မကြည့်ချင် မြင်ရင် မူးတယ်။
မပြတ်ကြည့်ချင် ၊ မမြင်ရင် ရူးပါ့မယ်
ကြင်ဖက်မှာ ကုလားမသာ ရှိရင်တော့
ဈာန် နိဗ္ဗာန် ငါ မသိချင်ဘူး
ဆယ်... ကိလေ၊ ငါ့မှာပွားတော့တယ်.....ကွယ်
မှတ်ချက်။ ။ ယခုကဗျာအား လမ်းသစ် ဂျာနယ်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ လမ်းသစ်သည် နာမည်နဲ့တူစွာ မလေးရှားတွင် ပထမဦးဆုံး လမ်းသစ်ကိုဖောက်ခဲ့သော ဂျာနယ်ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ အောင်မြင်သော ဂျာနယ်တစ်စောင်အဖြစ်ရပ်တည်လျှက်ရှိပါသည်။ ကဗျာရေးသူသည် လက်ရှိဘ၀တွေ့ ကြုံနေရသော ဘ၀အား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သား ခံစားတင်ပြသည်။ အရမ်းလှပ၊ ကာရံညီ လှပကြောင်းပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, November 25, 2009
ဒေါ်လာ ၂၀၀ တန်နဲ့ သမိုင်းဂုဏ်သိက္ခာ
ဒီစာကို ရေးသင့် မရေးသင့်အတော်စဉ်းစားမိသေးတယ်၊ သမိုင်းဂုဏ်သိက္ခာအရ ဖျက်မရတဲ့အမည်းစက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတော့ မရေးပဲမနေနိုင်တော့ပဲ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။သန်းရွှေတို့အုပ်စု သီရိလင်္ကာလို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံကလေးကို ဘုရားဖူးအဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁.၁၁.၂၀၀၉ နေ့မှာ ချီတက်ခဲ့ကြတယ်၊ တစ်ဆယ့်တစ်မီးငြိမ်းအောင် ယတြာသဘောနဲ့ ၁၁ ရက်နေ့မှာ လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ သန်းရွှေဆိုတာ လူသိ နတ်သိ ကမ္ဘာသိ အဖြစ်ထင်ရှားတာက လူသတ်ကောင်၊ ဘုန်းကြီးသတ်တဲ့ မိစ္ဆာကောင်၊ မကောင်းဆိုးဝါး ကလိင်ကကျစ် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာသူ၊ အာဏာအတွက် ဘာမဆို စတေးဝံ့သူ အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ပါ၊ သီဟိုဠ်ကျွန်းကိုလာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘုရားလဲဖူး လိပ်ဥလဲ တူးဆိုသည့်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်၊ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ဘာညာသာရကာဆိုတာက လူကြားကောင်းရုံသက်သက်မျှသာ။
သန်းရွှေ ရဲ့ မလိမ့်တစ်ပတ် လူလည်ကျချက်ကတော့ သမင်ကို ကျားက အဖေခေါ်ရလောက်အောင်ပင် အံ့မခန်း စွမ်းဆောင်နိုင်ပါပေသည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုတာ မြန်မာရဟန်းတော်များ ပညာရှာဖွေ ဆည်းပူးရာ ဘူမိနက်သန်နေရာမှန်တစ်ခု၊ သူတို့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က (B.A) (M.A) (Ph.D) ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ခြစ်ခြုတ်စုဆောင်းထားသည့် ၀တ္ထုငွေလေးများနဲ့ ခြို့တဲ့စွာ ပညာသင်ကြားကြရသည်။ အစားအသောက် အနေအထိုင်ဆင်းရဲစွာ သီတင်းသုံးကြရသည်။ အများစုက မပြေလည်ကြသည်ကများသည်။ ဒီအချက်ကို သန်းရွှေက ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားသည်။ သို့သော် သီဟိုဠ်ရောက်မြန်မာရဟန်းတော်စာသင်သားအရေအတွက်ကလည်း နဲနဲနောနောမဟုတ် အပါး (၃၀၀) ကျော်ရှိသည်၊ သန်းရွှေမြန်မာကျောင်းရောက်လာလို့ တစ်ပါးတစ်ချက်ထုလိုက်ရင် သန်းရွှေတစ်ကောင် မှုန့်မှုန့်ညက်ကြေသွားနိုင်သည်။ လာရဲတဲ့ သတ္တိလဲ သူမှာမရှိ၊ လာရင်လဲ သန်းရွှေအသက် မြန်မာပြည် ပြန်ပါနိုင်မည်မထင်၊ ဒီတော့ သန်းရွှေက အကွက်ကျကျစီစဉ်ညွန်ကြားထားခဲ့သည်။
(၂၂-၁၁-၂၀၀၉) နေ့မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ရှိ မကုဋာရာ မြန်မာကျောင်းတိုက်တွင် မြန်မာစာသင်သားရဟန်းသံဃာတော်တို့အား ဒေါ်လာ(၂၀၀) နှင့် သင်္ကန်းစသည့်လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို မြန်မာသံရုံးအား လှူဒါန်းစေခဲ့သည်။သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များဆိုသည်မှာ (၂၀၀၇)ခုနှစ် စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးနှင့်အတူ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်းမွေးဖွား ထင်ရှားလာသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်သည်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်၊ မိမိတို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကား ယုတ်မာရက်စက်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မသူတော် စစ်မိစ္ဆာကောင်များကို တရားနည်းလမ်းကျ ဆုံးမသွန်သင်ရန် ခိုင်မာကျစ်လစ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအချိန်ကတည်းက နအဖစစ်မိစ္ဆာကောင်များကို ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ကာ သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသည်၊ ယခုအချိန်အထိလည်းမှောက်ထားဆဲ နောင်လဲ မှောက်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်မှုသည် မသူတော် ယုတ်မာပက်စက်သည့် မင်းဆိုးမင်းညစ် ကလိမ်ကကျစ် အယောင်ဆောင် မင်းတု မင်းယုတ်များထံမှ မည်သည့် အရာဝတ္ထုကိုမျှ အလှူမခံ မပတ်သက်ဟု သံဃာ့ဆန္ဒခံယူပြီး သိမ်ဝင်ကာ ကံဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သန်းရွှေက ဒါကို ချေဖျက်ဖို့ရန်နှင့် ဘုရားဖူး အကြောင်းပြကာ သီရိလင်္ကာသို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အာဏာနှင့် ငွေရှိရင် ဘာမဆို လုပ်လို့ရတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ သန်းရွှေဟာ သံဃာတော်များရဲ့ အားနဲချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသုံးချသွားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အကွက်ဆင် ဂွင်ပိုင်အောင် ရိုက်တတ်လေ့ရှိသော သန်းရွှေသည် ကြပ်ပြေး သင်းချိုင်းကုန်းတွင် မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်ကာ ပီတိတွေဝေဖြာနေမှာတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်။
သန်းရွှေတစ်ယောက်မသိလိုက်သည့်အရာကတော့ အမှန်တရားကို အာဏာငွေနဲ့ လှဲလယ်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ၊ သန်းရွှေလှူဒါန်းသည့် ဒေါ်လာ(၂၀၀)နှင့် ဒန်ပေါက်ဆွမ်းကို မဘုဉ်းပေးအလှူမခံသည့် သံဃာတော်များက အပါး(၅၀) ကျော်ရှိနေခဲ့သည်။ တစ်နေ့ကို (၁၀)ကြိမ်(၁၀)လီ ရှိခိုးထိုက်ပေစွ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလှူခံခဲ့သည့် သံဃာတော်များကိုလည်း အပြစ်မမြင်လို၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးချို့တဲ့သည့်ဒဏ်ကို ဘုန်းကြီးရော လူပါ အလူးအလဲ ခံစားနေကြရသည့် နအဖခေတ်ဆိုးကြီးမဟုတ်ပါလား၊သူ့ကိုယ်မကယ်နိုင် ကိုယ့်သူမကယ်နိုင်ဘ၀ရောက်နေသည့် နအဖ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲဝယ် သန်းရွှေနှင့်အပေါင်းအပါများကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပီးပိုင် မမောင်းထုတ်နိုင်သေးသရွေ့ သန်းရွှေပြုသမျှ နုကြရပေဦးမည်သာ။
သန်းရွှေသွေးထိုးစမ်းခဲ့သော သီရိလင်္ကာမြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်(၅၀)ကျော်သည် မိမိတို့၏ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပေသည်။ ဒေါ်လာ (၂၀၀) နှင့်မိမိတို့၏ သမိုင်းအမည်းစက် အစွန်းအထင်းမခံခဲ့၊သန်းရွှေ စစ်မိစ္ဆာကောင်လှူဒါန်းသည့် ၀တ္ထုပစ္စည်းများကို အလှူမခံပဲ မိမိတို့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ မသန့်ရှင်းသည့် ငွေကြေးဝတ္ထုများကို အသုံးပြုခြင်းထက် ဖြူစင်သန့်ရှင်းသည့် မွန်မြတ်သည့်အရာကို တစ်မိနစ်တစ်စက္ကန့်မျှပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည် မြင့်မြတ်သည့် သူတော်ကောင်းတို့သာ လုပ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်ပေသည်။ သူတို့သည် သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ဟူ၍ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ သမိုင်းဂုဏ်ရောင် ၀င်းပြောင်နေကြဦးမည်ဖြစ်ပေသည်။
အလှူခံတော်မူခဲ့ကြသည့်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားလည်း အမိသာသနာတော်ကို ကြည်ညိုလေးစား ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည့် ဒကာဒကာမအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့က အထက်ပါအချက်များကို သဘောပေါက်ကာ သံဃာတော်များသည် မိစ္ဆာညွတ်ကွင်းသို့ မသက်ဆင်းမိအောင် မိမိတတ်စွမ်းနိုင်သည့်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်း ကာကွယ်စောက်ရှောက် လှူဒါန်းကြရန် အထူးတာဝန်ရှိပေသည်။ နအဖသည် မာယာပရိယာယ်အသွယ်သွယ်ဖြင့် ပြည်တွင်းရှိသံဃာတော်များကိုပါမက ပြည်ပရှိသံဃာတော်များကိုပါ စည်းရုံးဖျက်ဆီးဖို့ မီးစိမ်းပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ မီးဘေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုသည်နှင့်အညီ နအဖ၏ တို့မီးရှို့မီးများသည် အခြားသောနိုင်ငံများသို့ မကူးစက်နိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်တားဆီးကြရမည်ဖြစ်ပေသည်။ စစ်မှန်သည့် မွန်မြတ်သည့် မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်ထွန်းလာသည့်အမိမြေတွင် စစ်မှန်သည့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားအောင် မင်းဆိုးမင်းညစ် မင်းကောက် မင်းယုတ်မာ မင်းသူခိုး မင်းဂျပိုးများကို မွန်မြတ်သည့်အမိမြေမှ အမြန်ဆုံးမောင်းထုတ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
ယခုဆောင်းပါးအား ဆရာတော်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်ပါသည်။ ဆရာတော်သည် သိရိလင်္ကာရဟန်းအဖွဲ့ကို စတင် တည်ထောင်သူဖြစ်ပါသည်။ ယခုကာလတွင် မလေးရှားမှ တရားဘာဝနာ ပွားလျှက်ရှိပါသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, November 24, 2009
သိရိလင်္ကာက ရဟန်းတွေ ညံ့နေပြီလား
တလောက အသံလွှင့်ဌာနတခုမှာ သိရိလင်္ကာက သံဃာတွေ ဦးသန်းရွှေလှူတဲ့ဟာကို သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ကြုံးဝါးထားတာကို ကြားရတယ်။ ဆိုလိုချက်ကတော့ သူပေးရင် မယူဘူးပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဆိုတာက ဘုန်းကြီးကိုတောင် ခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ လူပဲ ဆိုတော့ သီရိလင်္ကာကသံဃာတွေပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါမျိုးလည်း ရှိသင့်တယ်။
ဒါနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေသိရိလင်္ကာရောက်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဘုရားဖူး။ ပြီးတော့ ဒေါ်ကြိုင်နဲ့ လိပ်ဥလည်းတူးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ သတင်းတွေကိုနားစွန့် ကိုယ့်ဆီက သံဃာတွေ ဘာများလုပ် လေမလဲပေါ့။ နားစွန့်။ ဒါနဲ့ပဲ ဦးသန်းရွှေနေပြည်တော်မြို့ ကြီးကို ပြန်လေသတည်း။
ဒီနေ့ မလေးရှားက ဆရာတော်တပါးက အီးမေးပို့တော့ တော်တော် အံ့သြသွားတယ်။
ဟာ…ဘာလဲပေါ့။ ပထမဆုံး ဂျီတော့မှာတွေ့ တော့။ နောက်မှ သူလင့်ပေးမှ ဖတ်ကြည့် တော့..သိရိလင်္ကာက မြန်မာရဟန်းတွေအတွက် ဒေါ်လာ ၂၀၀ စီ။ ကျောင်းအတွက် ၂၀၀၀ လှူဒါန်းတယ်။ ဒါန်ပေါက်..သင်္ကန်းနဲ့ ဘုရားသားတော်တွေကိုဖားနေတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ရတယ်။ သံဃာ နှစ်ရာလောက် ဘုန်းပေးကြတယ်။ ၅၀ လောက်က ကန့်ကွက်တဲ့ အနေနဲ့ မလာဘူးပေါ့။
သွားပါပြီ…သတင်းမှာကြားထားတာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သံဃာ ဆိုတာ ပြည်သူက လှူဒါန်းမှ အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးလား။ အခုတော့..သွားပီ..သမိုင်း လည်း ကွေးပြီ။ ဖြောင့်လို့မရ။ မီဒီယာမှာတော့ တမျိုး..လက်တွေ့ကတမျိုး…။ ဘယ်လိုလဲ။
ဆွမ်းတစ်နပ်..ဒေါ်လာ နှစ်ရာနဲ့ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါပါဘူး။ ဘုရားသားတော်တွေဆိုရင် ပိုပြီးသတိထားရပါ့မယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, November 22, 2009